Protocol Karirain'ny sonia teo amin'ny fihaonambe teo anelanelan'ny ERÜ sy Erciyes Aş | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral Anatolia38 KayseriVoamarika ao amin'ny Fivoriambe eo anelanelan'ny ERÜ sy Erciyes Aş ny protocole de careerer
21 / 01 / 2020 38 Kayseri, Central Anatolia, ANKAPOBENY, TORKIA, TELPHER
Nisy protocol momba ny asa dia nosoniavina nandritra ny fihaonana anelanelan'ny eru sy erciyes
Anjerimanontolon'i Erciyes (ERÜ) sy Kayseri Erciyes A.Ş. Ny protocol "Career at Summit" dia nosoniavina mba hampitomboana ny fahaiza-manaon'ny mpianatry ny oniversite sy ireo nahazo diplaoma.
Kayseri Erciyes A.Ş. Rektoran'ny ERU amin'ny lanonana fanasoniavana ao amin'ny tranoben'ny serivisy. Dr. Mustafa Çalış, Filohan'ny Birao Erciyes AŞ. Nanatrika izany i Murat Cahid Cıngı sy ireo mpampianatra.
Niresaka nandritra ny lanonana fanasoniavana ny protocol, Rector ERÜ. Dr. Mustafa Çalış, «Araka ny fantatrao dia oniversite iray ao amin'ny oniversite i Erciyes University izay miatrika ny olana rehetra ao an-tanànantsika. Rehefa nanomboka ny Rektate voalohany izahay dia nilaza ireto manaraka ity tamin'ny lanonana natolotry ny filohantsika. Nilaza tao amin'ny campus izahay fa hanao oniversite fa tsy oniversite. Miezaka mampihatra izany izahay amin'ny sehatra rehetra. Miezaka izahay hitazomana azy io ary mihevitra izahay fa manao izany. Androany isika dia hanao sonia ny iray amin'izy ireo. Tena noporofoinay ny departemanta tao amin'ny Oniversite Erciyes toy ny literatiora sinoa, literatiora Koreana, literatiora fiteny japoney, literatiora fiteny rosianina ary literatiora anglisy. Manana mpianatra sy mpikamban'ny mpampianatra mpikaroka eto koa izahay. Indrindra tato anatin'ny taona vitsy, dia nahatratra dingana lehibe tokoa ny fizahan-tany an-tendrombohitra any Erciyes. Amin'ny maha oniversite antsika, hiaraka amin'i Erciyes AŞ isika. Mihevitra aho fa hanome lanja fanampiny ho an'ny mpianatra ao amin'ny oniversite ary koa sanda fanampiny lehibe ho an'i Erciyes AŞ. Indrindra, ireo mpianatra izay nampianatra tamin'ny teny vahiny na nahazo diplaoma, raha ilaina dia ireo mpanazatra ny akademia no hiasa manokana indrindra ho an'ireo mpizahatany any Erciyes ao anatin'ity firafitr'ity protocol ity. Erciyes AŞ dia hanomana fotoana ara-potoana ireo mpianatra ary mahazo diplaoma tontolo iainana. Amin'izany fomba izany, dia handray anjara amin'ny fizahan-tany isika ary handray anjara amin'ny fampandrosoana ny tanànantsika. ”
Kayseri Erciyes AŞ Filohan'ny birao mpitantana Murat Cahid Cıngı dia nilaza, “Amin'ny maha-fianakaviana Erciyes antsika izao dia manao asa mahasoa izahay. Erciyes Ski sy ny ivom-pizahan-tany dia nahatratra fivoarana goavana amin'ny fizahan-tany tato anatin'ny taona vitsivitsy, niaraka tamin'ny fanohanan'ny Kaominintsika Metropolitan. Isika izao dia mampiantrano vahiny avy any amin'ny firenena sy firenena maro toa ny Firenena Mikambana ao an-tendrombohitra. Miaraka amin'ny sidina sarety, an'arivony maro no tonga any Erciyes sy milomano. Manana fahafahana handeha izy any Kayseri ary hahita ny tantaran'ny sivilizasiana ho an'ny taona 6. Mahatonga fandraisana andraikitra lehibe ara-toekarena sy sosialy eo amin'ny tanànantsika. Noho izany, indrindra tao anatin'ny taona faramparany, dia nampitombo ny filanay mpiasa izahay hamokatra tolotra izay miteny fiteny vahiny. Ianao no mahalala izany; Ny fiaraha-miasa eo amin'ny anjerimanontolo no lohahevitra iadian-kevitra ary tsy afaka hahatratra ny fahombiazana ao amin'ny firenentsika. Farafaharatsiny, te-hanombatombana ny fisian'ny fotodrafitrasa namolavola ny oniversite ato amin'ny Erciyes Ski Center. Ao amin'ny anjerimanontolo, dia manana departemanta maro isika izay manome fampianarana ny fiteny ho an'ny Fizahantany momba ny fizahan-tany sy ny Faculty of science ary taratasy. Noho izany, nifandray tamin'ireo departemanta izahay tamin'ny hevitra fa afaka mameno ny zavatra ilainay eto amin'ny anjerimanontolo. ”
Protocol fampianarana ara-lavitra eo anelanelan'ny TCDD General Directorate sy ny Oniversite Erzincan…
Fifanarahana momba ny tetikasa fampandrenesana Voasoratra teo anelanelan'ny TÜBİTAK sy IETT
Ny fifanintsanana fampiofanana momba ny fampiofanana momba ny fiofanana mikasika ny TCDD sy ny National Education
Fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa eo anelanelan'ny TCDD Transport sy Azerbaijan Railways Voasonia
Alstom Itu teknika fiaraha-miasa eo Torkia sy Protocol Sonia
Samulaş sy Yeşilyurt Demir Çelik Fampianarana School no nanasonia ny Protocole fanofanana
Ny campus ERU amin'ny kodiarana fingotra dia hanao peratra
Ny Protocols momba ny fampiofanana ny fampiofanana momba ny Traffic
Torkia Common Payment Sehatra Protocol Sonia
Ny BTSO sy ny Protoc Cooperation Cooperation Voasoratra
Fepetra momba ny fanabeazana momba ny teny vahiny ho an'ny mpiasa TÜVASAŞ
Fandrindrana fifindrafahana maimaimpoana voasoratra ao Kocaeli
Voasonia Protocol Road Eurasian
TAMIN-TOKO Protocol OrbEL-ODU
Eromasin'ny fizahan-tany Erciyes
Protocol karapoka mandritra ny fihaonana an-tampony
Ireo mpiasa ao amin'ny Metro no nahita ny finday very 22 andro taty aoriana
Androany amin'ny tantara: 22 Janoary 1856 nosokafana ny tsipika Alexandria Cairo